द्रुत नयाँ इलेक्ट्रिक स्कूटर कारखाना - चीन द्रुत नयाँ इलेक्ट्रिक स्कूटर निर्माता, आपूर्तिकर्ता
वयस्कहरूको लागि इलेक्ट्रिक स्कूटर मोटरसाइकल
यदि सवारहरू यात्राको लागि सवारीमा बस्न चाहन्छन् भने त्यहाँ सिट उपलब्ध छ। तपाईंको दैनिक कम्युटको लम्बाइमा निर्भर गर्दै, त्यहाँ अन्य मोडेलहरू छन् जसले तपाईंको अवस्थाको लागि राम्रो नतिजाहरू प्रदान गर्न सक्छ - उदाहरणका लागि लामो दूरीको कम्युटलाई ठूलो दायराको साथ केहि चाहिन्छ। त्यहाँ एक रबर बुशिंग यो मुद्दा संग मद्दत गर्न आदेश गर्न सक्नुहुन्छ। ठूला पाङ्ग्रा भएको स्कुटर कति छिटो जान सक्छ? त्यसोभए यदि तपाइँ अफ-रोड यात्रामा द्रुत गतिको गतिको आनन्द लिन चाहनुहुन्छ भने, तपाइँ डुअलट्रोन अल्ट्रा जाँच गर्न सक्नुहुन्छ जुन 50 माइल प्रति घण्टा र धेरै छिटो यात्रा गर्दछ। यद्यपि, ठोस टायरहरूले अफ-रोड यात्राको लागि राम्रो काम गर्दछ किनकि तिनीहरूले फ्ल्याटहरू पाउँदैनन्, तपाईंलाई कम मर्मतसम्भार छोडेर।
वयस्कहरूको लागि शीर्ष 10 इलेक्ट्रिक स्कूटरहरू
80 माइल। बेकार डिजाइन। ● टर्न सिग्नल। रंगीन स्क्रिन उपकरण डिजाइन। तपाईंको एकल मोटर 48V 500W रियरमा स्थापना गरिएको छ जसले तपाईंलाई निजी सम्पत्तिमा 30kph मा गति दिन सक्छ, र तपाईंको अगाडिको ड्रम/रियर डिस्क ब्रेकले तपाईंलाई सुरक्षित रूपमा रोकिएको सुनिश्चित गर्नेछ। यसमा तपाईलाई मन पराउने उत्कृष्ट मोटर छ, यसमा एर्गोनोमिकली अप्टिमाइज्ड डुअल इलेक्ट्रोनिक एन्टि-लक ब्रेकहरूले तपाई ३.९ मिटर भित्र पूर्ण रूपमा रोकिनेछ भन्ने विश्वास ल्याउँछ। र एउटा बटन थिचेर, तपाइँको उनागी पेटेन्ट गरिएको स्टेनलेस स्टील काज प्रणालीले तपाइँ तपाइँको अर्को साहसिक कार्यको लागि तयार नहुन्जेल व्यावहारिक रूपमा कहिँ पनि भण्डारण गर्न एक सहज, आश्वस्त क्लिकमा फोल्ड र लक गर्दछ। उनागी ई स्कूटरहरूले सबै अपेक्षाहरू पार गर्दछ जब यो उपस्थिति, प्रदर्शन र सुविधाको लागि आउँछ - तिनीहरू तपाइँको व्यक्तिगत मुक्ति उपकरणको रूपमा चिनिन्छन्।
वयस्कहरूको लागि भारी शुल्क इलेक्ट्रिक स्कूटर
त्यसोभए, तपाइँले तपाइँलाई अनुमति छ वा छैन भनेर सुनिश्चित गर्न तपाइँको एयरलाइन्स संग तपाइँको राज्य को कानून र नियमहरु को जाँच गर्नुपर्छ। त्यसकारण, सधैं राम्रो गुणस्तरको सस्पेन्सन प्रणाली भएको स्कुटरलाई विचार गर्नुहोस्। पूर्ण रूपमा नयाँ चेन टेन्सनिंग प्रणाली - हाम्रो कम्पनीको साथ मात्र तपाईले नयाँ चेन टेन्सन प्रणाली फेला पार्न सक्नुहुन्छ। यसको फुल-स्प्रिङ सस्पेन्सन र अगाडिको वायवीय टायरको लागि धन्यवाद, तपाईं सजिलैसँग बम्पियर सडकहरूमा जान सक्नुहुन्छ। विशेष गरी अफ-रोड भू-भागमा उत्कृष्ट स्मूथ स्कूटरको सवारी प्राप्त गर्न निलम्बनले सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। रेजर E100 आमाबाबुका लागि उत्कृष्ट इलेक्ट्रिक स्कूटर हो जसले आफ्ना बच्चाहरूलाई सुरक्षित रूपमा शहर वरिपरि घुमाउनको लागि स्कूटर लिन चाहन्छन्। यसले तपाईंलाई छिटो र कुशलतापूर्वक जहाँ जाँदै हुनुहुन्छ त्यहाँ पुग्ने छ।
वयस्कहरूको लागि हल्का इलेक्ट्रिक स्कूटर
यद्यपि, तपाईंसँग सबैभन्दा छिटो अफ-रोड इलेक्ट्रिक स्कूटर चलाउन पर्याप्त अनुभव वा सीप नहुन सक्छ। इलेक्ट्रिक स्कूटर प्राप्त गर्दा, हामी तपाईंलाई ठूलो पाङ्ग्रा साइज किन्न सुझाव दिन्छौं किनभने सानो साइजले तपाईंको सवारी अनुभवलाई गाह्रो बनाउँछ, विशेष गरी असभ्य भू-भागमा। हाम्रो व्यावसायिक प्राविधिक टोली तपाईंको सेवामा पूर्ण हृदयले रहनेछ। हाम्रो व्यवसायले प्रशासनमा जोड दिन्छ, प्रतिभाशाली कर्मचारीहरूको परिचय, साथै टोली निर्माणको निर्माण, कर्मचारी ग्राहकहरूको मानक र दायित्व चेतना बढाउन कडा प्रयास गर्दै। Segway एक ब्रान्ड हो जुन केहि समय को लागी भएको छ, त्यसैले यसको निर्माण तल छ।
ठूला वयस्कहरूको लागि इलेक्ट्रिक स्कूटर
सबैभन्दा सुरक्षित मोडेलहरू सामान्यतया उच्च तौल क्षमता भएका, वायुरहित वा न्युमेटिक टायरहरू हुनेछन् जुन डिफ्लेट हुँदैन र अचानक पप हुँदैन, डबल ब्रेकिङ वा अन्य उच्च-टेक ब्रेकिङ प्रणालीहरू, र सामान्य उच्च गति (10-15mph) ), र सहज सवारी सुनिश्चित गर्न झटका अवशोषकहरूसँग डबल सस्पेन्सन वा निलम्बनहरू। फेरि, ठूलो कुरा होइन, पहिले नै भारी बाइकमा थोरै अतिरिक्त वजन। यो घुँडामा अनुकूल छ र यसलाई ठोस बनाउनको लागि पूर्ण कार्बन फ्रेमको साथ बनाइएको छ, तर धेरै भारी छैन। 40 पाउन्ड भन्दा कम केहि पनि धेरै हल्का छ, र 80 lbs भन्दा माथि वजन धेरै भारी छ। तिनीहरूले यस प्रविधिलाई आफ्नो पहिलो इलेक्ट्रिक स्कुटरमा प्रोटोटाइप गर्दै छन् जुन रोबोटहरूद्वारा पूर्णतामा फोल्ड गरिएको छ, जसले स्टाइललाई स्टाइलमा र यहाँ उता तिर बदल्छ। त्यहाँ तिनीहरूमध्ये प्रत्येकमा ट्रेडअफहरू छन्, र हामी एकलाई अर्कोमा सिफारिस गर्दैनौं, बरु यसलाई तपाईंको व्यक्तिगत प्राथमिकतामा छोड्नुहोस्।
100kg भन्दा माथि वयस्कहरूको लागि इलेक्ट्रिक स्कूटर
यो फोल्डिङ इलेक्ट्रिक बाइकले कार्बन-फाइबर ह्यान्डलबारहरूसँग जोडिएको एयरक्राफ्ट-ग्रेड एल्युमिनियम फ्रेमबाट निर्मित अद्वितीय डिजाइन प्रस्तुत गर्दछ, यो यात्रामा साहसिक खोज्नेहरूका लागि उत्तम विकल्प बनाउँछ। ● तपाईंको कार ट्रंकमा सुविधाजनक बोक्नको लागि द्रुत फोल्डिंग डिजाइन। ● 11 इन्चको रबरको ट्युबलेस टायर विभिन्न आधारमा लिनको लागि। YaYiYa फ्याट टायर बाइक हाम्रो सूचीमा सबैभन्दा सस्तो विकल्प हो। यो बाइकले कम लागत र उच्च गुणस्तरको बीचमा उत्कृष्ट सन्तुलन पाउँछ। यस बाइकको मूल्यको तुलनामा यसअघिका ग्राहकहरु गुणस्तरमा सन्तुष्ट छन् । तपाइँ पक्का हुन सक्नुहुन्छ कि तपाइँको बाइक कम गुणस्तरको वा छोटो समय भित्र बिग्रने खतरा हुनेछैन। यो चम्किलो रातो फ्याट टायर माउन्टेन बाइकले तपाई जहाँ पनि सवारी गरिरहनु भएको छ, तपाईलाई अलग बनाउने निश्चित छ। तपाइँ सही मोडेल किन्न कम्तिमा $ 2000 खर्च गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ। हामीले हेरिरहेका अर्को फ्याट टायर बाइकमा उत्कृष्ट सस्पेन्सन, ब्रेकहरू छन्, र प्रिमियम मापदण्डहरूमा उचित कम मूल्यमा बनाइएको छ।
वयस्कहरूको लागि वाटरप्रूफ इलेक्ट्रिक स्कूटर
उत्कृष्ट प्रदर्शन अफ-रोडको लागि निर्मित, Dualtron Ultra v2 तपाईंको ब्याट्री प्याक पूर्ण रूपमा चार्ज हुँदा (साइडर र सडक अवस्थाहरूमा निर्भर गर्दै) 120km सम्म टिक्न सक्छ। यदि तपाईं उत्कृष्ट चार पाङ्ग्रे इलेक्ट्रिक स्कूटर खोज्दै हुनुहुन्छ भने, यो तपाईंको पहिलो रोजाइ हुनुपर्छ। तिनीहरू दुबै अफरोड स्कूटर सवारीका लागि उत्कृष्ट विकल्पहरू हुन्। र अब तपाई जान्न चाहानुहुन्छ, अमेजनमा तपाईले आफ्नो हातमा जित्न सक्ने सबैभन्दा छिटो इलेक्ट्रिक स्कूटर कुन हो? तपाईले बाइकमा इलेक्ट्रिक स्कूटर वा स्केटबोर्डलाई विचार गर्न चाहनुहुने मुख्य कारण पोर्टेबिलिटी हो, विशेष गरी यदि तपाईलाई सीढीहरू माथि जानु पर्छ वा कडा कोरिडोरहरू मार्फत जानु पर्छ। यो जस्तो जनावरमा, तपाईं गडबड गर्न चाहनुहुन्न जब यो शक्ति रोक्न आउँछ। ह्यान्डलबारहरू बाहिर रहँदा पनि स्टेम तल आउँदा यो फोल्ड गर्न मिल्छ।
८ इन्चको व्यास भएको स्कुटरमा मुद्रास्फीति-मुक्त टायरहरू प्रयोग गरिन्छ। यस प्रकारको टायरले ठोस र वायमेटिक टायरहरूको फाइदाहरू संयोजन गर्दछ। फोल्ड गर्न मिल्ने इलेक्ट्रिक स्कुटरका शीर्ष ५ फाइदाहरू हेर्नुहोस्। बजारमा रहेका लगभग सबै विद्युतीय स्कुटरहरूमा कुनै न कुनै प्रकारको फोल्डिङ मेकानिजम हुन्छ, सबै स्कुटरहरू एउटै तरिकाले फोल्ड हुँदैनन्। के इलेक्ट्रिक स्कूटरमा फोल्डिङ मेकानिजममा समस्याहरू समावेश गर्ने व्यापक वारेन्टी छ? काम गर्न इलेक्ट्रिक स्कूटर चलाउनुको अर्को फाइदा भनेको भण्डारण व्यावहारिकता हो किनभने तिनीहरू फोल्ड गर्न मिल्ने, सार्वजनिक यातायातमा लिन सजिलो, लिफ्ट वा तपाईंको डेस्कमुनि भण्डारण गर्न सकिन्छ। तपाईंले काममा पुग्न यात्रा गर्दा ट्राफिकमा लामो समय बिताउनु पर्दैन र सार्वजनिक यातायात प्रयोग गर्दा तिनीहरूलाई कहाँ राख्ने भन्ने चिन्ता लिनु पर्दैन।
वयस्कहरूको लागि पोर्टेबल इलेक्ट्रिक स्कूटर
स्कुटर घटना यातायातमा सबैभन्दा नयाँ "डिस्प्टर टेक्नोलोजी" हो र उबर र लिफ्ट जस्ता राइड-सेयरिङ कम्पनीहरू पहिलो पटक दृश्यमा आएपछि देखिएका धेरै बढ्दो पीडाहरू देखाउँदै छन्, बर्कलेको क्यालिफोर्निया विश्वविद्यालयका सह-निर्देशक सुसान शाहिनले भने। यातायात स्थिरता अनुसन्धान केन्द्र। स्यान डिएगोमा फर्मले जफत गरेको अधिकांश स्कुटरहरू बर्ड र लाइमका हुन्, तर ती कम्पनीहरूले आफ्नो सवारीसाधन फिर्ता गर्न तिर्न अस्वीकार गरिरहेका छन् र उनीहरूको मुद्दा मार्फत स्कूटस्कूपलाई अदालतमा लडिरहेका छन्, बोरेलीले भने। बर्डले यस सूचनामा पेश गर्नको लागि जानकारीको मस्यौदा तयार गर्दैछ, जसको उद्देश्य शहरलाई आवश्यक कानूनको लागि तयार पार्नु हो।
वयस्कहरूको लागि शीर्ष इलेक्ट्रिक स्कूटर
मिड-ड्राइभ मोटरहरू, जस्तै Bosch र Shimano विधिहरू, बाइकको बीचमा छन् र चेन मार्फत पाङ्ग्रामा क्षमता स्थानान्तरण गर्दछ। ह्यालिफ्याक्स क्षेत्रीय नगरपालिकाका प्रवक्ता रायन नेयरिङले भने, ह्यालिफ्याक्स ट्रान्जिटले केही वर्ष पहिले फेरीहरूमा पेडलहरू सुरक्षित गरेर आन्दोलनलाई प्रतिबन्धित गर्ने भएकाले थप सुरक्षित हुन डिजाइन गरिएको विभिन्न बाइक र्याकहरू स्थापना गरेको बताए। Allana Loh र उनको श्रीमान्, Wayne, Dartmouth मा आफ्नो घर छाडेर ह्यालिफ्याक्स को शहर को अन्वेषण गर्न म्याकडोनाल्ड ब्रिज माथि आफ्नो फ्याट बाइक चढ्छन्। SRAM GX Eagle 30t चेनरिङको साथ आउँदछ जसले तपाईंलाई पूर्ण रूपमा लोड गरिएको फ्रेम माथि र पहाडहरू माथि पुग्न पर्याप्त सानो गियर दिन्छ। तिनीहरू सबै 100kg भन्दा माथि वयस्कहरूको लागि राम्रो स्कूटरहरू छन्, 300 lb मानिसका लागि तीन इलेक्ट्रिक स्कूटरहरू सहित।
मेरो सबैभन्दा नयाँ मनपर्ने ऊन मोजाको ब्रान्ड डार्न टफ हो। ऊनी मोजाको राम्रो जोडी र हुड भएको पफी ज्याकेट कुनै पनि राम्रो जाडो बाइक सवारीमा ल्याउनको लागि दुई राम्रा राम्रा चीजहरू हुन् र यी कुकुरहरूलाई मैदान र लुगा धुने कोठामा दुवै परीक्षण गरिएको छ। प्रस्तुत गरिएको पहिलो मोडेल एउटै हो, जुन चारवटा इलेक्ट्रिक स्कूटरहरू भएको मोडेल हो जुन दुई भन्दा बढी स्थिर छन्। टायर 16 इन्च चौडा छ र त्यहाँ एक अगाडि र दुई पछाडि छन्। फराकिलो टायरहरूको लागि क्लियरेन्स सिर्जना गर्न, ब्रान्डहरूले फराकिलो रियर हब स्पेसिङ प्रयोग गर्छन् (197mm सम्म-एक सामान्य माउन्टेन बाइकमा 148mm-चौडा रियर हब हुन्छ)। २०२० को आउटसाइड म्यागजिन बेस्ट फ्याट बाइक जित्ने बाइकले भर्खरै २७.५” फ्याट बाइकको पाङ्ग्राहरू २७.५×४.५” वा २६×५” सम्मको टायरको लागि क्लियरेन्सका साथ अपडेट गरेको छ। हामी तपाईहरू सबैलाई अबदेखि नयाँ वर्षसम्म छुट्टीको आनन्दको कामना गर्दछौं! यस लेखको लक्ष्य तपाईको लागि उत्तम अफ-रोड इलेक्ट्रिक स्कूटर फेला पार्न मद्दत गर्नु हो।
सबैभन्दा महँगो इलेक्ट्रिक स्कुटर
केही मोडेलहरूमा धेरै शक्तिशाली एलईडीहरू छन्, तर यो सँधै राम्रो अभ्यास हो कि अतिरिक्त बत्तीहरू मात्र स्थापना गर्नुहोस्। धेरै इलेक्ट्रिक स्कुटर मोडेलहरू भन्दा छिटो चार्ज गर्न सक्छ। A: धेरैजसो किक स्कूटरहरू 200-250lbs बीचको पेलोडमा काम गर्छन् तर त्यहाँ विशेष रूपमा अग्लो वयस्कहरूको लागि डिजाइन गरिएको मोडेलहरू छन् - सुपर-मजबूत XOOTR एडल्ट किक स्कूटरले 800 पाउन्डसम्म लिन सक्छ! प्रयोग गर्न सजिलो - हाम्रो वयस्क इलेक्ट्रिक स्कूटर ह्यान्डल थ्रोटल अपरेशनको साथ आउँदछ, यसलाई कुनै पनि चालकका लागि प्रयोग गर्न सजिलो बनाउँछ। यात्रुहरूले एक वयस्क स्कूटर प्रयोग गर्नेछन् या त कामको लागि वा सार्वजनिक यातायात प्रयोग गरेपछि यात्राको अन्तिम भागको लागि सवारी गर्न। हाम्रा सबै उत्पादनहरू वयस्क वा किशोरकिशोरीहरूका लागि उपयुक्त छन्, र सामाजिक दूरी र कार र सार्वजनिक यातायातको प्रयोगमा कमीको आगमनदेखि नै लोकप्रियता प्राप्त भइरहेको देखिन्छ।
123456 अर्को > >> पृष्ठ १/११